सार्वजनिक हुँदा कस्ती देखिएलिन् गायिका विष्णु माझी ? – Jaljala Online
सार्वजनिक हुँदा कस्ती देखिएलिन् गायिका विष्णु माझी ?
Posted on June 19, 2019 Author Jaljala Online	Comment(0)
असार ४, काठमाडौं । अहिले सांगीतिक बजारमा लोकप्रिय लोकगायिका विष्णु माझी सार्वजनिक हुने ‘गसिप’ चलिरहेको छ।
यो खबर हामीले नेपाललाइभबाट लिएका हौ, १० वर्षभन्दा बढी समयदेखि ‘मिडिया’सँग लुकेकी यी गायिका भौतिक रुपमा बाहिर आउँदा कसरी सार्वजनिक होलिन्? कस्ती भइसकेकी होलिन्?
उनले धेरै वर्षपहिले दोहोरी गाएको भिडियो क्लिप युट्युबमा देखिन्छ, जहाँ उनी अलि लजालु स्वभावकी प्रतित हुन्छिन्। हल्का श्याम वर्णकी यी गायिकाले अहिले लज्जाको घुम्टो उघारिन् कि उघारेकी छैनन् होला?
सञ्चारमाध्यममा उनी सार्वजनिक हुने ‘गसिप’सँगै स्वभाविक रुपमा गायिका माझीबारे यस्ता प्रश्न र जिज्ञासाहरु सतहमा आउँछन् नै। तर, उनी र उनका श्रीमान् सुन्दरमणि अधिकारी जो लोकसंगीतमै क्रियाशील छन्, उनले साँच्चै गुमनाम जीवनबाट बाहिर ल्याउने सोच बनाएकै हुन् त?
हामीले उनी निकट एक लोकसंगीतमा सक्रिय गायकलाई सोधेका थियौं। ‘खै, उनीहरु अहिले नै सार्वजनिक हुने सोचमा छन् जस्तो लाग्दैन। तर मिडियामा निरन्तर रुपमा गायिका माझीलाई बन्धक बनाइएको खबर आएपछि भने यसबारे यो जोडीले केही न केही सोचेको हुनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तपाईंहरुलाई मैले नाम खुलाएर यति मात्र भनेको खबर थाहा पाए भने सुन्दरमणि मसँग रिसाउछन्।’
लोक गायनको समकालमा सबैभन्दा राम्रो आवाजकी धनी र सबैभन्दा महँगी गायिका हुन् विष्णु माझी। उनले एउटा गीत गाएको पारिश्रमिक एक लाख रुपियाँसम्म लिन्छिन्। उनका दर्जनौं गीतहरु ‘सुपर–डुपर’ छन्। यद्यपि अरु कलाकारझैं उनलाई स्वदेश तथा विदेशका स्टेज कार्यक्रममा देख्न पाइँदैन।
गीत रेकर्डिङका बेला स्टुडियो पुग्दासमेत कसैसँग बोलचाल नगरी विष्णु गुपचुप शैलीमा आफ्नो काम फत्ते गर्ने गर्छिन्। यी गायिका घरमै बन्धक बनाइएको समाचार आएपछि केही महिनापहिला उनी र उनका श्रीमान् स्याङ्जा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको निर्देशनमा सफाइ दिन जिल्ला प्रहरी कार्यालय पुग्नुपरेको थियो।
त्यतिबेला पनि यो जोडीले मिडियाबाट बच्न आफ्नो अनुहार नचिनिने गरी ढाकेर प्रहरी कार्यालयमा उपस्थित भएको थियो। तर पछि प्रहरीले नै उनीहरुबारे सतहमा आएका हल्लाहरु पुष्टि गर्ने कुनै आधार नरहेको बताएको थियो। प्रहरी अधिकृतले भनेका थिए, ‘उनीहरुको निजी जीवन कसरी जिउने भन्ने हक उनीहरुमै निहित रहेकाले बाहिर आएको हल्लामा सत्यता छ भन्ने लागेन।’
‘निरन्तर रुपमा नेपाली मिडियाले सुन्दरमणि-विष्णुबारे सोधखोज गरिरहेकाले उनीहरुमा सार्वजनिक हुनुपर्ने दबाब सिर्जना हुँदै गएको अनुमान भने लगाउन सकिन्छ,’ सुन्दरमणि निकट ती गायकले भने।
पाकिस्तानबाट भारत छिरेको विमान भारतले तत्काल ल्याण्ड गराईदियो
Posted on May 10, 2019 Author Jaljala Online
वैशाख २७, काठमाडौँ । पाकिस्तान तर्फबाट भारत छिरेको एक विमानलाई भारतीय वायुसेनाले जयपुरमा इमरजेन्सी ल्याण्ड गराएका छन् । भनिएको छ कि शुक्रवार पाकिस्तानतर्फबाट एन्टोनोव-१२ कार्गो विमान गैर-आधिकारिक एयर रूटबाट भारत छिरेको थियो । भारतीय एयर डिफेन्स सिस्टमले तत्काल उक्त विमानलाई ल्याण्ड गराएको थियो । बिमान ल्यान्डिङ गराएपछि पाईलटसँग सोधपुछ गरिएको छ । वायुसेनाका अधिकारीहरुका अनुसार […]
दाङमा कक्षा तीन पढ्ने १३ वर्षीय सन्दिपले ट्याक्टर चलाएपछि…
Posted on September 20, 2019 September 20, 2019 Author Jaljala Online
असोज ३, दाङ । तुलसीपुरको विरेन्द्रचोकमा एउटा ट्रयाक्टर आफ्नै गतिमा कुदिरहेको थियो । तर त्यसमा चालक देखिदैन थिए । यो खबर नारायण खड्काले सेतोपाटीमा लेखेका छन् । त्यो देखेर डिउटीमा रहेका प्रहरी जवान अलमलमा परे । उनले दौडिएर गएर ट्रयाक्टर रोके। एकजना किशोरस्टेरिङबाट उठ्दै प्रहरीलाई हेरे र सोधे, ‘के भो सर?’ प्रहरीले सोध्यो ‘के तिम्रो […]
नक्कली नोटको बिगबिगी, कसरी चिन्ने नक्कली नोट ? यस्तो छ राष्ट्र बैंकको टिप्स, जानी राखौ
Posted on June 5, 2019 Author Jaljala Online
जेठ २२, काठमाडौं । बेलाबेलामा नक्कली नोट भेटिएका समाचारहरु बाहिर आइरहन्छन् । कहिले नक्कली नोटमात्रै भेटिन्छन् त कहिले नक्कली नोट कारोबारीसमेतलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको समाचार सुनिन्छ । पोखरा, बिरानगर, धनगढी, नेपालगञ्ज, बिर्तामोड लगायतका ठाउँमा पनि विभिन्न समयमा नक्कली नोट भेटिएका छन् । काठमाडौं उपत्यका मात्रै होइन, नक्कली नोटको कारोबार विकट जिल्लामा पनि हुने गरेको छ […]
५५ लाखको अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार जित्ने नेपाली युवा टिम, के हो उनीहरूको काम ? [नालीबेली]
अब नेपालमा अवैध मोबाइल नचल्ने, कहिलेबाट हुन्छन बन्द ? पढ्नुहोस